Tsy misy rano maloto kely kamerona Ultrasonic diffuser USB China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Akanjo kely fandroana kely,Mini Ultrasonic diffuser Usb,Ultra Mini Usb diffuser
Home > Products > Mini diffuser > Tsy misy rano maloto kely kamerona Ultrasonic diffuser USB
Tsy misy rano maloto kely kamerona Ultrasonic diffuser USB
[Compact Design] Ity mini-humidifier ity dia vita amin'ny singa elektronika ABS ABS, narafitra namboarina tamin'ny voamaina hazo, izay mahatonga azy ho tena voajanahary sy fahatsinjovana. Miaraka amin'ny endrika famolavolana azo tanterahina sy mora azo, mora ny esorina ny satroka misy fofona manitra dia tsy hikoropaka hametahana ny satroka mahery ianao rehefa mamontsina ny tananao. Esory fotsiny ny satrony, ampio rano sy menaka ilaina, mankafy fiainana manara-penitra.
[Fahasamihafana] ny mpanelanelana Ultrasonic dia afaka mihazona rano hatramin'ny 80ml ary mamokatra hatrany amin'ny 15-25ml ny hamandoana isan'ora. Ny herin'entika tsy mandeha rehefa maharitra mandritra ny 4 ora, izay miantoka fiarovana.
[Ho an'ny torimaso tsara kokoa] ny teknolojia ultrasonika, ity humidifier ultrasonic ity dia milamina rehefa miasa. Ny humidifier USB dia afaka manalefaka sy mamontsina ny hoditra maina sy voageja amin'ny ririnina. Miaraka amin'ny loko 7 miova ho an'ny fanovana mandeha ho azy, ahafahanao matory tsara kokoa.
[Mora ampiasaina] plugs USB dia afaka mifandray amin'ny fiara, solosaina, herinaratra finday, sns .Tsy maninona na aiza ianao, raha mbola manodidina ny tavoahangy feno rano, dia azo hatsofohana ny fantsom-pamatsiana USB.
[Fampiharana midadasika] Hevitra ho an'ny trano fampiasa amin'ny Spa Spa Home Home.Mamporisika ny fanesorana ny fikolokoloana ny hoditra tsara tarehy, ny fikolokoloana ny hatsaran-tarehy, ny fisorohana ny gripa, esory ny herinaratra static, tsara kokoa hamandoana ny rivotra ary manadio ny tontolo iainana.
Fampiharana menaka manara-penitra
Ultrasonic Humidifier Mini Mist Fogger diffuser amin'ny dia
boka Humidifier Mini Water diffuser miaraka amin'ny Led Light
Ultrasonic Mini Humidifier Air diffuser ho an'ny menaka manan-danja
Akanjo kely fandroana kely
Akanjo kely madinidinika kely
Akanjo kely fandriana diffuseur
Mpanome efitra kely
Madio marefo zazakely mora fanadiovana
Tanjona Humidifier manokana